केस नं २१२ को खुशी
nepalnamcha.com२०७८ असार ३०
केश न २१२ सदा झै सेन्टरमा आयो । यो उसको तेस्रो भेटघाट थियो । फुलेको चनाजस्तै हुने अगाडिको भेटघाटभन्दा यो भेटघाट फरकजस्तै लाग्न थाल्यो ।
पुरानो चिनजानजस्तो गरेर हाम्रो भलाकुसारी चल्न थाल्यो । ‘आउनुहोस्, बस्नुहोस, पानी पिउनुस्’ नि भन्न परेन उसलाई आज । म भित्रभित्रै खुशी भएँ किनकि अगाडिका दुई भेटघाटमा उसले भित्र छिर्न पनि असजिलो अनुभव गरेको महसुस गरेकी थिएँ । सास रोकिएजस्तो आवाज, गोलभेँडाका दानाजस्ता आँखा र थाकेको अनुहार त यो पटक देखिएन ।
‘खुसीको कुरा ! मेम अब आफ्नो काम म आफै गर्न सक्छु’, अहिले तपाईंलाई कस्तो छ भन्न नपाई उसले एक सासमा भन्यो ।
सुरुका दिनमा बोल्ने बनाउन पापड बेल्नु परेको अनुभव मनमा ताजा थियो ।
‘तपाईसँग बसेर बनाएको रुटिङले मलाई केही न केही गरु हुँदैछ । बिहान र बेलुकीको १-२ घण्टा ध्यान गर्छु । दिउँसो तरकारी बारीमा काम गर्छु । छोरी अनलाइन कक्षामा बस्छिन् । श्रीमती पनि अलि खुशी हो कि जस्तो देखेँ । भोक लाग्थेन । अहिले भोक लाग्ने भाछ । बुझेँ अब’, उसले भन्दै गयो, ‘अँ, रक्सी खाएर स्वास्नी पिट्न छाडेदेखि आमा छोरीले बात गर्न थाले नि । धारे हात लाएर ‘मरे हुन्थ्यो नि असत्ती’ भन्ने बुढीले ‘ल सुपाडी खाऊ’ भन्छे । हे हे । तरकारी बेचेर ल्याएको पैसो बुढीले जम्मा गर्छे । अब कोरोना सिद्धिएपछि बुढीको नाममा तरकारी पसल सुरु गर्ने भनेको । सुझाव दिनु न मेम । हामी मिलेर यही पसल गर्ने । अब म विदेश पनि जान्नँ । अरूको कुरा सुनेर छोरी, बुढीलाई रुवाएँ । विदेशबाट ल्याएको पैसो त हो भनेर केटी र रक्सीमा सिध्याएँ ।’
‘हिजोसम्म कुरो सुन्न नचाहने, श्रीमतीले तानी तानी ल्याएको बुढो, तथानाम गाली गर्ने रक्सिवाला यही हो’ भन्न मैले सकिनँ । उसको कुरा सुन्दै उसलाई हेरिरहेँ ।
‘तपाईं आउनुको विशेष कारण ? अब म तपाईंलाई कसरी हेल्प गर्न सक्छु ?’, मैले सोधेँ ।
‘आज मनको गाँठो फुकाउन आको । मलाई परिवारसँग मिलाइदिन भाको मेमको फी दिन सकेको थिइनँ । हिम्मत गरेर यो महिना ५०० बचाएर फी तिर्न आएँ । रक्सी, चुरोट, केटीबाट बचाएको पैसा । बुढी र छोरीको मायाले म केही गर्न सक्छु । नो नभन्नु ल । फेरि चाहियो भने आउँछु नि !’, हँसिलो अनुहारमा बाइ गरेर ऊ निस्कियो ।
मनमनै केस नं २१२ को खुशी, सुखी परिवारको कामना गरेँ । मनमनै मेरा गुरुहरुलाई धन्यवाद दिएँ, जसले यो ज्ञान प्रदान गर्नु भएको थियो ममा ।
सबैका ‘भला’ होस् ।